कण्डम निःशुल्क हुँदा प्याड किन भएन स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू ? जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
कण्डम निःशुल्क हुँदा प्याड किन भएन स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू ? जानी राखौ
Published : 15 February, 2019 3:19 pm
लेखक : सृजना बस्नेत
कण्डम निःशुल्क बाँड्नाले यौन रोग र जनसंख्या वृद्धि रोक्न मदत त पुगेको होला । कण्डमको प्रयोग र मानिसको रोजाइको बीचमा विकल्प पनि छ । तर, महिनावारीलाई रोक्ने अन्य विकल्पको प्रयोग गर्न सम्भव छैन । किनकी यो प्रजनन् क्षमताको लागि सक्षम हरेक महिलाको प्राकृतिक प्रकृया हो । हुर्किदै गरेका किशोरीहरुले कुनै हिचकिचाहट सार्वजनिक शौचालय अनि सरकारी स्वास्थ्थ चौकीबाट निःशुल्क प्याड प्रयोग गर्ने दिन आउला त स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू ?